Ogaden News Agency (ONA) – Maraykanka oo Xidhay Diblumaasiyiin Itoobiyan Ah oo Fiisooyin Been Abuur Ah Lagu Qabtay.
Maraykanka oo Xidhay Diblumaasiyiin Itoobiyan Ah oo Fiisooyin Been Abuur Ah Lagu Qabtay.
Dowlada Maraykanka ayaa xabsiga u taxaabtay Diblumaasiyiin Itoobiyan ah oo lagu eedeeyay inay dad qoyskooda ah oo aan qaxooti ahayn visa Diblumaasi oo sharci darro ah kusoo galiyeen maraykanka ayna jabiyeen xeerka dowlada Federalka Maraykanka.
Desta Woldeyohannes oo ah haweenay 54 sano jir ah oo ay dowlada Itoobiya usoo magacowday ku xigeenka qunsulka Itoobiya ee magaalada (Los Angels) ayaa lagusoo oogay sadex danbi oo kala duwan.
Haweenaydan ayaa lagu soo eedeeyay sadex danbi oo been abuur ah iyo inay fiisooyin been ah kusoo dhoofisay qoyskeeda waxaana danbiyada kamid ah in walalkeed iyo naagtiisa oo reer ah ay sheegtay in ayna isqabin oo ay iskaabulo yihiin ayna iyadu kafaala qaadi doonto naloshooda inta ay maraykanka joogan sidookale waxay sheegtay in wiilyar oo uu walalkeed dhalay yahay wiil ay ayadu dhashay.
Dacwad oogayaasha ayaa sheegay in Wasiirka Arrimaha dibadda ee Itoobiya uu waraaq bishii july iyo Augost 2016 visa dal kugal ah uga dalbay safarada maraykanka ee Addis Ababa.
Waraaqada uu Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Itoobiya safarada udiray ayuu kusheegay in Desta Woldeyohannes ay raacayaan Dad qoyskeeda ah oo magaalada Los Angels kula noolaan doona inta ay shaqada Diblumaasinimo kujirto ayna ayadu nolooshoda oo dhan damaanad qaadayso Wasiirka ayaa warqada uu safarada udiray kusheegay in walalkeed iyo naagtiisu ayna isqabin ilmaha walalkeedna ay ayadu dhashay.
Hadaba iyadoo codsiga Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya la tixgalinayo ayaa fiisaha Diblumaasiyiinta ee A-1 loo yaqaano lasiiyay sidiina maraykanka kuyimaadeen. Hadaba desta Woldeyohannes walalkeed iyo wiilkuu dhalay ayaa dagay oo kunoolaa casimada maraykanka ee washington waligoodna may tagin Los Angels iyo halkii loogu talagalay.
Danbi baadhayaasha maraykanka ayaa sheegay inay Maxkamad latiigsan doonan Desta Woldeyohannes oo ku kacday danbi wayn iyo wax isdaba marin danbigana ayaa hadii lagu heli waxay mudan kartaa 30 sano oo xabsi ah. Badhitaankan waxaa kaqayb qaatay waaxda danbi baadhista ee Wasaarada Arimaha Dibada maraykanka ee loo yaqaan (DSS) iyo faraca danbi baadhista ee magalada Los Angels.
Taliska gumaysiga Itoobiya ayaa musuqii intuu dalkiisii ka gudbay ayuu lugaha la galay wadamadii dunida ugu horumarsanaa waxayna maanta Itoobiya dhaxfadhidaa ceeb aad uwayn.